I-China Quality And Wholesale CAT6 Cable Manufacturer - AmaConnexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ikhebula le-Ethernet > Ikhebula le-CAT6
Izintambo zethu ze-CAT6 Ethernet ziqinile, ziyaguquguquka futhi zakhiwe kahle. Le CAT6 Ethernet Cable ifaka ibhantshi le-PVC, izintambo zethusi ezingenalutho nezixhumi ze-RJ45 ezinothintana negolide. Izintambo zethu ze-CAT6 ziyi-UL, ETL kanye ne-RoHS.
OkwethuCAT6 Izintambo ze-Ethernetziyaqina, ziyaguquguquka futhi zakhiwe kahle. Le CAT6 Ethernet Cable ifaka ibhantshi le-PVC, izintambo zethusi ezingenalutho nezixhumi ze-RJ45 ezinothintana negolide. Izintambo zethu ze-CAT6 ziyi-UL, ETL kanye ne-RoHS.
1.Ukwethulwa Komkhiqizo weCAT6 Izintambo ze-Ethernet
OkwethuCAT6 Izintambo ze-Ethernet zilungele ukusetshenziswa kwasekhaya nasehhovisi kufaka phakathi amaseva, amaphrinta, amamodemu, ama-routers, ama-hubs, amabhokisi wokushintsha, amakhompyutha, ama-consoles womdlalo, i-VoIP, izinhlelo zokusebenza ze-PoE nokuningi. Izintambo zethu ze-CAT6 Ethernet zixhuma amakhompyutha namadivayisi anjengezintambo zekhebula, ama-routers, ama-panels, ama-hubs, nama-switch.
2.UmkhiqizoIpharamitha (Ukucaciswa) kwe-CAT6 Izintambo ze-Ethernet
Ubuningi obuphezulu be-Polyethylene
3.UmkhiqizoIsici Nokusetshenziswa kweCAT6 Izintambo ze-Ethernet
Ifanele i-10G-750MHz High-Speed ​​Data Applications, iGigabit Ethernet, i-Fast Ethernet ne-155Mbps TP-PMD / CDDI
Idizayinelwe Ukufakwa Kukalwe Riser Okulinganiselwe
Ikhebula Lesigaba 6A Esingasetshenziswanga Sokubhangqa Kwababili (UTP)
Ama-4-Pair akhonjwe kalula ngamabili anemigqa yombala
Ukulandelana kobude obulinganayo KuJacket
Kunikezwe ku-A 1000ft Spool
4.UmkhiqizoDetails of the CAT6 Izintambo ze-Ethernet
ICAT6 Bulk Ethernet Cable, Solid Copper, Dry Gel Tape, 23 AWG ilungele amanethiwekhi ahamba ngaphansi komhlaba. Le ntambo ye-CAT6 Ethernet isebenzisa ithephu evimba amanzi ukuxosha umswakama kude nabaqhubi bezethusi abaqinile. Amabhangqa alo amane abaqhubi bezethusi abaqinile aba-odwa ngazimbili ezisontwe ngombala. Ngaphezu kwalokho, le khebula inokuqina kwe-polyethylene ephezulu kanye nejazi le-polyethylene elincane.
5.UmkhiqizoQualification of the CAT6 Izintambo ze-Ethernet
I-CAT6 Izintambo ze-Ethernet zihambisana ne-UL, RoHS futhi ziqinisekisiwe nge-ISO9001: 2015
6.Deliver, Shipping Futhi Ukukhonza weCAT6 Izintambo ze-Ethernet
Izinsuku eziyi-15 nge-10K 1000ftCAT6 Izintambo ze-Ethernet
1 Q: Ingabe lokhu CAT6 Izintambo ze-Ethernetube ikhebula elanele ukusebenzisa Amandla phezu kwe-Ethernet (poe)?
A: Iningi lale khebula lixhuma kumadivayisi we-POE (ama-WiFi Access Points, amakhamera, izingcingo ze-VOIP, njll.). Kulula kakhulu ukulungiselela nokukhwabanisa. Ungasebenzisa i-analyzer yenethiwekhi (hhayi nje ukuqhubeka) ukuqinisekisa ikhebula eliqhutshwa ku-CAT6 (1Gbs speed).
2.Q: Ungawasebenzisa kude kangakanani amakhamera we-IP ngalokhuIkhebula le-CAT6?
A: Ngokobuchwepheshe amakhamera we-POE IP anomkhawulo omkhulu ka-300ft ngaphezu kwe-CAT6 Cable.
3.Q: Uyini umehluko phakathi kweCAT5, CAT6 neIkhebula le-CAT7?
Amathegi ashisayo: Ikhebula le-CAT6, China, Quality, Wholesale, Manufacturer